[22 / 10 / 2019] ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးပါတီHaydarpaşaနှင့် Sirkeci မီးရထားဘူတာရုံတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[22 / 10 / 2019] IMO Bursa ဌာနခွဲ၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏မျှော်လင့်ချက်	16 Bursa
[22 / 10 / 2019] သမ္မတAkçayထံမှ TSO ဥက္ကPresident္ဌမှမီးရထားတုံ့ပြန်မှု	29 Gumushane
[22 / 10 / 2019] Haydarpaşaနှင့် Sirkeci မီးရထားဘူတာရုံ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[22 / 10 / 2019] Nzmir သည် 2023 တွင်အမြန်ရထားကိုရလိမ့်မည်	35 Izmir
[22 / 10 / 2019] 760 Freiburg သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်မီးလောင်ခဲ့သည်	49 ဂျာမဏီ
[22 / 10 / 2019] TCDD ၏Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ရထားဘူတာတင်ဒါဖော်ပြချက်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[22 / 10 / 2019] Eskişehir '' တူရကီဆိုင်ကယ်လာကြ! ' ဖွဲ့စည်းထားသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ	26 Eskisehir
[22 / 10 / 2019] 'Ankara Noise Action Plan' စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်	06 တူရကီ
[22 / 10 / 2019] Ankara ရှိမီးအလင်းရောင် 'Green Flash' လျှောက်လွှာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ	06 တူရကီ
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး78 Karabükတစ်ဦးကနယူးအဆင့်ကြားကဘနှင့်အတူKARDEMİR
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 78 Karabük, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, Advertising ကြော်ငြာ (Advertorial), တူရကီ 0
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် kardemir တက္ကသိုလ်သစ်တစ်ခုခြေလှမ်း
Kardemir Karabükတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားနေသော - ကပိုပြီးစနစ်တကျစက်မှုဇုန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် Kardemir စေရန်ယနေ့တက္ကသိုလ်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်သိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့လာမှုများရလဒ်များစက်မှုလုပ်ငန်းမှလွှဲပြောင်းသေချာစေရန်အလို့ငှာရလဒ်များရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်Karabükတက္ကသိုလ်အကြားအသစ်တခုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်သည် protocol ကိုပါမောက္ခချုပ်တစ်ဦးအခမ်းအနားများတွင် ဒေါက်တာ Polat နှင့် CEO ဖြစ်သူဒေါက်တာ Rafik Kardemir ဟူစိန် SOYKAN လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာအတွင်းမှာပဲသဘောတူညီချက်, တက္ကသိုလ်-စက်မှုလုပ်ငန်း R & D စီမံကိန်း, ကျောင်းသားလုပ်ငန်းစဉ်ပေါင်းစည်းရေး, ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များ၏ရုံး, စာတမ်း, Master နှင့်ပါရဂူပညာရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဘာသာစကားများထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းအဖြစ်အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်။
Kardemir ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏လိုအပ်ချက်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်သံနှင့်သံမဏိ Institute ကဓာတ်ခွဲခန်းမှာတက္ကသိုလ်၏ပံ့ပိုးမှုများဖြင့်တည်ထောင်ထားသည့်စမ်းသပ်ချက်များနှင့်စမ်းသပ်မှုများအကြောင်းကိုကြားသိအထွေထွေ၏ပါဝင်မှုကိုသေချာပြုနိုင်ပါတယ် Kardemir တက္ကသိုလ်အုတ်မြစ်ဝန်ထမ်းတွေပွင့်လင်းဖွဲ့စည်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုဖွင့်မှီဝဲ Kardemir န်ထမ်းများ၏နည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ရေးများအတွက်တက္ကသိုလ်နေဖြင့်ဆရာ, ဆရာမများ၏ချိန်းတောင်းမည် ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလညျပတျခဲ့စီစဉ်အဖြစ်အစီအစဉ်များကိုဖုံးအုပ်နေတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု protocol ၏သေဒဏ်စီရင်ဘို့တာဝန်ကျတဲ့နေရာပေါ်ပါတီများအကြားအထွေထွေကိစ္စရပ်များကိုအများတို့သည်လည်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရက်။
အခမ်းအနား, အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ပါမောက္ခမှာ ဒေါက်တာ Polat နှင့် CEO ဖြစ်သူဒေါက်တာ Rafik Kardemir ဟူစိန် SOYKAN, မြင်သာထင်ရလဒ်များကိုသို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ protocol ၏အရေးပါမှုကိုသတိပြုဥပမာတက္ကသိုလ်-စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတစ်မော်ဒယ်၏ဖန်တီးမှုမှမိမိတို့၏ကတိကဝတ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါရထားစနစ်များဧရိယာစီးပွားရေးအစည်းအရုံးအကြား CRRC ဒေဝီနှင့်အတူဘတရုတ် 03 / 11 / 2018 Karabükတက္ကသိုလ်တရုတ်နိုင်ငံ၏ပြည်နယ်ရထားလမ်းကုမ္ပဏီ CRRC ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု protocol ကိုအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမီးရထားထုတ်လုပ်သူ Zhuzhou စက်ခေါင်းနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်Karabükတက္ကသိုလ်ရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာဌာနကျောင်းသားများကိုနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအလုပ်သင်ဖြစ်နဲ့တံခါးကိုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်တူရကီ protocol ကိုအတွက်ရထားလမ်းစနစ်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုသေချာစေရန်အထောက်အကူပြုဖို့ကြပါစေယင်း။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု protocol ၏တရုတ်မီးရထားကုမ္ပဏီများသည် CRRC တည်ထောင်ခြင်း၏တူရကီအဖြစ်များသည့်ရထားစနစ်နည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနကိုထောကျပံ့မည်, တူရကီKarabükတက္ကသိုလ်အတွက်စက်ရုံများ၏အခြေအနေတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ တူရကီအတွက်ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်တည်ရှိသောဤသည် ဗဟိုပြု. Karabükတက္ကသိုလ်, ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကြပါစေယင်းထောက်ပံ့စနစ်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပွငျကပြောကြားခဲ့့သည်က ...
UTIKAD Erkeskin နိုင်ငံတော်သမ္မတ: တူရကီ၏ကိုယ်စားများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုဝန်ကြီးအရေးကြီးအဆင့်Atıldıတွင် 09 / 07 / 2013 UTIKAD နိုင်ငံတော်သမ္မတ Erkeskin: တူရကီနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကိုယ်စားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီနောင်များဆိပ်ကမ်းအကြားအစ္စတန်ဘူလ်ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မိုင်ယာမီ-Dade Dante ခ Fascell ဆိပ်ကမ်းမှအရေးပါသောခြေလှမ်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို UTIKAD နိုင်ငံတော်သမ္မတ Turgut Erkeskin, အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်ဘူးသောအဦးတည်ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးသဘောတူညီချက်တူရကီ-အမေရိကန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင် သတ်မှတ်ခြင်း, သူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍကပြောသည်နှစ်ခုဆိပ်ကမ်းများအကြားလှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးအပြုသဘောလမ်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ ကုန်သည်အဏ္ဏဝါအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌ Mustafa Azman, မိုင်ယာမီအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များဝီလီ Gort, တောင်ဖလော်ရီဒါကသမ္မတဂျေဒိုတောရက်စ်၏စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမေရိကန်ဦးစီးဌာန, မိုင်ယာမီ World Trade Center ကိုနိုငျငံတျောသမ်မ Charlotte Gallogly ၏မြို့များ၏ဦးစီးဌာနကျင်းပတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားမှအစ္စတန်ဘူလ်ဆိပ်ကမ်းကို ...
TCDD နှင့်ဘရထားမိတ်ဖက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ 12 / 02 / 2017 TCDD နှင့်ဘမိတ်ဖက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရထားစနစ်များကျင်းပခဲ့သည်: ပူးတွဲက "ရထားစနစ်များလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ" ကစီစဉ် TCDD နှင့်Karabükတက္ကသိုလ်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 10 2017 အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပေါ်မျှော်စင်စားသောက်ဆိုင်Behiç Erkin ခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့သည်; အစီအစဉ်များမီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın နှင့်Karabükတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် Rafik က Parker အဖြစ် TCDD အရာရှိများ, ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန, တာကနိုင်ငံတော်မီးရထားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Inc ကို, TÜLOMSAŞTÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုယ်စားလှယ်၏အသက်မွေးမှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပညာရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု, မြို့ပြရထားလမ်းစနစ်များအော်ပရေတာ, ARUS, စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ, အချို့ လူထုအခြေပြုလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကတက်ရောက်ခဲ့သည်တက္ကသိုလ်များ။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာယေရှု၏ဖွင့်ပွဲမှာစကားပြောသော ...
အဆင့် Wagon Caféလူငယ်စင်တာအဆင့်ဖွအတူ Bilecik 22 / 03 / 2019 Bilecik မြို့တော်ဝန် Nihat နိုငျသညျ, 100 သမ္မတနိုင်ငံ။ စီမံကိန်း၏ရူပါရုံကို Bilecik အတွက်ရရှိပါလိမ့်မယ် Wagon Caféအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ ; အပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် မြို့တော်ဝန်အသုံးအနှုန်းတွေ Nihat Can အသုံးပြုခြင်း '' '' ကျွန်တော်တို့သည်ကဖေးနဲ့အတူခြေလှမ်း Bilecik'i ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်စင်တာခြေလှမ်းကိုတည်ဆောက်နေကြသည် Hams Wagon '' ဟုပြောသည်: 'ကျွန်တော်မဆိုအခါသမယနှင့်အတူဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း' ငါတို့သည်ငါတို့၏လူငယ်များကိုချစ်နှင့်လူငယ်များအများကြီးအရေးပါမှုပေးခြင်းနေကြသည်။ ဒီသဘောနဲ့ကျနော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြကြောင်းပစ်မှတ်ဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်စီမံကိန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံကိုအကြား Bilecik'i Wagon Café 2023 ဖြစ်လိမ့်မည်။ 1000 စတုရန်းမီတာအတွက်အဆောက်အဦး Teo Wagon Caféနောက်ကွယ်မှတည်ရှိပြီးထိုဒေသတွင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်သည့်ချိုင့်၌ Hams အသစ်တစ်ခုကိုဆွဲဆောင်မှုအချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုဖမ်းဆုပ်: မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပထိုင်ခုံ ...
ချေးငွေသဘောတူညီချက်များ၏ငွေကြေးအဘို့အKARDEMİRနယူး Air ကိုခှဲစက်ရုံ '' စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး 04 / 10 / 2014 ချေးငွေသဘောတူညီချက်အဘို့အKARDEMİRစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ခေတ်မီစီမံကိန်းသစ် Air ကိုခှဲစက်ရုံ 's ငွေကြေးKarabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (Kardemir) Inc ၏စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် သစ်တစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်သောလက်ရှိ 1.8 တန်ချိန်သန်းပြုစုပျိုးထောင်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူထွက်ဆောင်သွားစေဖို့ "စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ခေတ်မီစီမံကိန်း" ကိုပိုမိုထပ်ပြောသည်နှစ်ပတ်လည်စွမ်းရည်၏3တန်ချိန်သန်း။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, ဓာတ်ငွေ့ဖြည့်ဆည်းဖို့ Kardemir,3နှစ်စဉ်တန်ချိန်သန်း Ziraat Bankası A.Ş. များအတွက်အသစ်က Air ကိုခှဲစက်ရုံအမှတ်4ငွေကြေးများ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ပေါ် မူတည်. တိုးမြှင့်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ် 42.500.000 ဒေါ်လာစျေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုချေးငွေသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်အတူ။ ခရက်ဒစ် ...
ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးပါတီHaydarpaşaနှင့် Sirkeci မီးရထားဘူတာရုံတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
သမ္မတAkçayထံမှ TSO ဥက္ကPresident္ဌမှမီးရထားတုံ့ပြန်မှု
Haydarpaşaနှင့် Sirkeci မီးရထားဘူတာရုံ
Nzmir သည် 2023 တွင်အမြန်ရထားကိုရလိမ့်မည်
760 Freiburg သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်မီးလောင်ခဲ့သည်
Eskişehir '' တူရကီဆိုင်ကယ်လာကြ! ' ဖွဲ့စည်းထားသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
RayHaber 22.10.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
'Ankara Noise Action Plan' စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
Ankara ရှိမီးအလင်းရောင် 'Green Flash' လျှောက်လွှာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ
IETT မှ Karakoy Tunel တွင် Ara Guler ပြပွဲ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Alicetinkaya ဘူတာသန့်ရှင်းရေး, ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများယောဘသည်
24: အောက်တိုဘာလ 15 30 @ - 16: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် (TÜVASAŞ)
30: အောက်တိုဘာလ 14 30 @ - 15: 30
အဆိုပါရထားစနစ်များဧရိယာစီးပွားရေးအစည်းအရုံးအကြား CRRC ဒေဝီနှင့်အတူဘတရုတ်
UTIKAD Erkeskin နိုင်ငံတော်သမ္မတ: တူရကီ၏ကိုယ်စားများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုဝန်ကြီးအရေးကြီးအဆင့်Atıldıတွင်
ချေးငွေသဘောတူညီချက်များ၏ငွေကြေးအဘို့အKARDEMİRနယူး Air ကိုခှဲစက်ရုံ '' စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး
Karabükတက္ကသိုလ် (KBU) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ Burhanettin ယဉ် xnumx.uluslarara ရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရုံအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုခဲ့သည်
အဆိုပါ 1900 ခုနှစ်တွင်ယနေ့တွင် (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ကို Hejaz မီးရထားပြပွဲဖွင့်လှစ် kbui
အဆိုပါ kbui တည်းဖြတ်ပြီး Panel ကိုပေါ်အတွက်ရထားလမ်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး
ဘပါမောက္ခချုပ် Uysal ဆီမီးရထားအင်ဂျင်နီယာများရော့ခ်၏အသင်းဥက္ကဋ္ဌ
KBI4။ သူကဥရောပအာရှရထားရထားလမ်းပြပွဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (413) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Psa နှင့် Hyundai တို့၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာမော်ဒယ်များအတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထောက်ပံ့ပေးမည်